တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူ – USDP
February 28, 2020 February 28, 2020 usdpLeaveaComment on တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ပဉ္စမအကြိမ် မြောက် စာအောင်သဘင်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ တွင် တောင်ဥက္ကလာပစေတီတော်ဝင်း အတွင်း မဟာမုနိဓမ္မာရုံ၌ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲစာအောင်သံဃာအရှင်သူမြတ်များနှင့်သီလရှင် ဆရာလေးများအပါး ၂၅ဝကျော်အား တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင်နှင့် မြို့နယ်ပါတီဝင်များ၊ ရပ် ကွက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များ စုပေါင်းဆွမ်း ဆန်စိမ်းလောင်းလှူခဲ့ကြသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကချင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပညာပေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲတက်ရောက်
ညောင်ဦးခရိုင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေး တက်ရောက်
အမရပူရမြို့နယ်​၊ စာတိုးမြို့ပြင်​ကြီး​ကျေးရွာအုပ်​စု ပါတီဆိုင်းဘုတ်​တင်​ပွဲအခမ်းအနား
December 15, 2019 December 16, 2019 usdp
၄၃ နှစ်​​မြောက်​ ရခိုင်​ပြည်နယ်​​နေ့ကို ဂုဏ်​ပြုသောအားဖြင့် စစ်တွေမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ​သွေးလှူဒါန်း
December 20, 2017 usdp
မုဒုံမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ပညာရေးဌာနသို့ Mask များ လှူဒါန်းခြင်းနှင့်ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်
June 24, 2020 June 24, 2020 usdp
September 23, 2020 September 23, 2020 usdp
September 23, 2020 usdp
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်များ စည်းရုံးရေးဆင်း
September 22, 2020 September 22, 2020 usdp
JosephRog commented on ဗန်းမော်မြို့နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အမျိုးသမီးဘဝမြှင့်တင်ရေး အိမ်တွင်းမှုဆပ်ပြာချက်သင်တန်းဖွင့်: Medicine information leaflet. Drug Class. can i pu
Streaming Jav Online Free - JavPlay commented on မင်းဘူးမြို့နှင့်စကုမြို့ရှိ လူမှုရေးအသင်းများသို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဗဟိုအတွင်းရေးမှူး ဦးပိုက်ထွေးမှ အလှူငွေများ လှူဒါန်း: Unquestionably believe that which you said. Your f
mobile legends hacks commented on မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ လုပ်​ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအ​ဝေးကျင်းပပြုလုပ်​: That is really interesting, You're an excessively
JesusZedly commented on ဗန်းမော်မြို့နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အမျိုးသမီးဘဝမြှင့်တင်ရေး အိမ်တွင်းမှုဆပ်ပြာချက်သင်တန်းဖွင့်: Здравствуйте! Готов купить ваш сайт, бюджет до 500
먹튀검증업체 commented on ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ: Hi, I do believe this isagreat web site. I stumb